समुदाय क्रिसमस - पारिवारिक जीवन
थोरै दिनुहोस्। धेरै मद्दत गर्नुहोस्। खिलौने र खाना hampers को लागी स्थानीय परिवारहरु लाई यो क्रिसमस समर्थन गर्न को लागी कल गर्दै।
By व्यवस्थापक • अक्टोबर 13, 2021
२०२१ सबैको लागी, र विशेष गरी कमजोर परिवार र बच्चाहरु को लागी अर्को कठिन बर्ष भएको छ। खिलौने, खाना hampers वा उपहार कार्ड दान गरेर हाम्रो समुदाय क्रिसमस अपील समर्थन गर्नुहोस् र क्रिसमस आनन्द फैलाउन जो यो धेरै आवश्यक छ।
सामुदायिक क्रिसमस यो छुट्टीको मौसममा तपाइँको चन्दा ड्राइभमा भाग लिई स्थानीय असुरक्षित परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने अवसर हो।
हामी क्रिष्टमसको लागि समयमा परिवारलाई डेलिभर खान बाधकहरू र उपहारहरू संकलन गर्नेछौं। हामी तपाईलाई मद्दत चाहान्छौं।
१ 197 Bl ब्लफ रोड, Sandringham VIC 3191।
9-5pm, सोमबार 8 नोभेम्बर - बुधवार 1 डिसेम्बर
म के दान गर्न सक्छु?
भाउचर एक अद्भुत उपहार हो कि परिवारहरु लाई उनीहरु लाई चाहिन्छ किन्ने लचीलापन को अनुमति दिन्छन्। अन्य सामान को सम्बन्ध मा, कोभिड को अप्रत्याशितताको कारण, कृपया पूरा बाधा र व्यक्तिगत खेलौना को रूप मा दान प्रदान गर्नुहोस्। यसले हामीलाई सुरक्षित रुपमा आवश्यक प्याकेजहरु लाई आवंटित गर्न सक्षम बनाउनेछ।
कृपया तल स्वीकार्य ह्याम्पेर आईटमहरू र उपहारहरूको सुझावहरू हेर्नुहोस्।
विकल्प १: फूड हैम्पहरू पूरा गर्नुहोस्
यी आधारभूत र मौसमी खाद्य वस्तुहरूको चयनको साथ एक पुन: प्रयोज्य शपिंग ब्याग भरी एक पूर्ण बाधा प्रदान गर्नुहोस्।
पास्ता / चामल / चाउचाउ
लामो आयु दूध
स्प्रेड्स (Vegemite, मह)
फल केक / mince pies
चकलेट्स / lollies
मिठाई / प्यारी बिस्कुट
मसाला (सरसों / सॉस)
शेयर / स्टक क्यूब्स
ग्र्याभक्स / ग्रेभी
चिप्स / pretzels / पपकोर्न
चिया / कफी / मिलो
मुसेली बार / स्नैक बारहरू
सुख्खा / डिब्बाबंद फल
सबै वस्तुहरू नाश हुने र समाप्त हुने छैन।
विकल्प २: खेलौना / उपहार कार्ड
खेलौना वा उपहार कार्डहरू निम्न उमेर समूहहरूका लागि $ २० - $ between० बीचको मूल्यवान सुझाव दिन्छ।
उमेर ० - २ months महिना
VTech शैक्षिक खेलौना
उमेर २ - years बर्ष
पाक कला प्ले सेट
Crayons र गतिविधि पुस्तक
क्रेओला / शिल्प / चित्रकला किट्स
फर वास्तविक घरपालुवा जनावर
उमेर - - १२ बर्ष र अधिक
विज्ञान / भवन किट
खेल उपकरण / सेट
रिमोट कन्ट्रोल पाल्तु / कार
खेल उपकरण उदा। फुटबल
शरीर हेरचाह / शौचालय सेट
कला आपूर्ति / स्टेशनरी
सहायक उपकरणहरू टोपी र सनग्लास
बच्चाहरु उपहार कार्ड (किशोर, पनि!)
Woolies / Coles / Aldi आदि बाट बहु रिटेलर उपहार कार्ड
वयस्क गृह उपहार कार्ड
कृपया नहीं उपहार लपेट। यो हामीलाई उचित उपहार बाँडफाँड गर्न अनुमति दिन्छ।
कृपया एक इमेल पठाउने समुदायenagement@familyLive.com.au वा हामीलाई कल गर्नुहोस् 03 85995433 हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यदि तपाईं स्थानीय परिवारहरूको समर्थन गर्न चाहानुहुन्छ र के तपाईं दान दिन चाहानुहुन्छ।
हामी अनुरोध गर्दछौं कि दान 1 डिसेम्बर सम्म क्रिसमस को लागी समय मा वितरण को लागी समय को लागी प्राप्त गरीन्छ।
यो क्रिष्टमसमा खुशी फैलाउन यसले समुदाय लिनेछ। हामी तपाईंलाई थोरै दिन र धेरै मद्दत गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं। हाम्रो समुदाय को भाग हुनु भएकोमा धन्यबाद।